विश्वप्रकाशको प्रश्न : मन्त्रीले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण गर्ने ? - Himali Patrika
हिमाली पत्रिका ९ असार २०७८, 9:12 pm
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारका मन्त्रीहरूले नै जातीय विभेदको पक्षपोषण हुने गरी सन्देश दिएको टिप्पणी गरेका छन्। रूपा सुनारलाई दलित भएकै कारण कोठा नदिएकी घरबेटीलाई शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको गाडीमा चढाइएपछि प्रवक्ता शर्माले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘मेन्सन’ गर्दै प्रवक्ता शर्माले ट्विटमा प्रश्न गरेका छन्, ‘जातीय विभेदको कहालीलाग्दो व्यथा अन्त्य गर्न साझा पहल गर्ने कि मन्त्रीले नै पक्षधरताको खुला सन्देश दिने?’
आफू दलितकी छोरी भएकै कारण आफूलाई कोठा नदिइएको भन्दै रुपा सुनारले प्रहरीमा घरबेटी विरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। उनै घरबेटी बुधबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको गाडीमा सिंहदरवार परिसरबाट सरर बाहिरिएकी थिइन्।
‘जातीय विभेदको प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिनु पर्छ प्रधानमन्त्रीज्यू? हिजो गिटार बजाउँदै समानताको गीत गाउँदै, आज गाडी गुडाउँदै, मन्त्रीको साइरन बजाउँदै राज्य एउटा पक्षमा उभिन मिल्छ?,’ प्रवक्ता शर्माको प्रश्न छ।
सिंहदरबारबाट घरबेटीलाई मन्त्रीले गाडीमा लिएर गए, उल्टै ‘रुपा सुनार मुर्दावाद !’
सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जातकै आधारमा घर भाडा नदिने घरबेटीलाई लिन मन्त्री सिंहदरबारको प्रहरी वृत्तमा पुगेका छन् । बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपालले घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई आफ्नो गाडीमा लिएर गएका हुन् ।
रुपाले आफूलाई जातका आधारमा कोठा नदिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी गरे पछि बबरमहलकी घरबेटी प्रधानलाई सिंहदरबारको प्रहरी हि’रासतमा लिएर अनुसन्धान गरिएको थियो ।
तर, मन्त्री र प्रधानको जात र निकट सम्बन्धका कारण तीन दिन घरबेटी प्रधान हिरासतमुक्त भएका छन् । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार जमानीमा उनलाई छाडेको भनिएको छ । उनलाई श्रीमान् मुकुन्द प्रधानको रोहबरमा जमानीमा छाडिएको छ ।
बुधबार प्रधान सिंहदरबारबाट हिरासतमुक्त हुँदै गर्दा बाहिर भीडले सिठी बजाउँदै, ‘रुपा सुनार-मुर्दावाद !’ भन्ने नारा लगाएका थिए । त्यसपछि भीडबाटै प्रधानलाई मन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी चौकीबाट निस्केका घरबेटी प्रधानलाई आफ्नै गाडीमा राखेर बाहिरिएका थिए । तर, भीडले भने उहीँ नारा लगाइरेको थियो ।